Mogadishu Journal » Dowladda oo shaki galisay qabsoomida waqtigii loo qabtay shirka dib-u-hishiisiinta Jubbooyinka
Mjournal : — Afhayeenka dowladda Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisoow oo ka warbixinayay booqashada madaxweynaha ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in uu madaxweyne Xassan Sheekh u tagay Kismaayo sidii wada tashiyo ula yeelan lahaa maamulka halkaa ka jira iyo waliba bulshada ku dhaqan gobollada Jubbooyinka.
‘’Socdaalka madaxweyne Xassan Sheekh sida aad ka warqabtaan waxaa uu noqonayaa kii ugu horeeyay oo uu madaxweyne Soomaaliyeed ku tago magaalada Kismaayo tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe, sidaa daraadeed waa booqasho ku saleysan wadatashi iyo waliba sidii leysku dhaafsan lahaa aragtiyo ku saleysan nabadeynta deegaannada Jubbooyinka,’’ ayuu yiri afhayeenka dowladda.
Eng Yariisoow ayaa sheegay in si gaar ah mas’uuliyiinta labada dhinac uga wada hadli doonaan qabsoomida shirka dib u- hishiinta beelaha wada dega Jubbooyinka oo sida uu sheegay leysla meel dhigi doono ajandaha looga wada hadllyo.
‘’Waxaa laga wada hadlli doonaan shirka dib-u-hishiisinta Jubbooyinka qabsoomidiisa, iyo waliba sidii leys kula meel dhigi lahaa qodobada iyo waliba ajandaha shirka,’’ ayuu yiri sheegay C/raxmaan Yariisoow.
Mar la weydiiyay in uu mar kale dib u dhici karo shirka mar haddii hadda uun laga wada hadllayo ajandihiisa, ayuu sheegay in labada dhinacba uu jiro rabitaan ku saabsan qabsoomida shirka, sidaa daraadeed ay dhici karto in uu arrimo farsamo dib ugu dhaco.
‘’Maya..maya labada dhinacba runtii rabitaan xoog leh ayaa ka muuqda, waa suurtagal in uu arrimo farsamo dib ugu dhaco shirka, laakiin wax kale ma jiraan,’’ayuu yiri C/raxmaan Yariisoow.
Waqtiga loo qabtay in uu shirka ka furmo magaalada Muqdisho ayaa ku beegan maalinta berri ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 2-da Bisha November, hasse ahaatee waxaa muuqata in shirkaas uusan furmi karin maalinta berri ah, madaama xitaa aysan magaalada Muqdisho ku sugneyn ergadii loogu talagalay in ay shirka ka qeyb-gasho.